नेयमार र एम्बाप्पेले पीएसजी छाड्न सक्ने !
You are at:Home»खेल»नेयमार र एम्बाप्पेले पीएसजी छाड्न सक्ने !
By bktnews Posted on	 May 28, 2019 खेल
काठमाडौँ । फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीका प्रशिक्षक थोमस टुचेलले क्लबका स्टार खेलाडी नेयमार र केलियन एम्बाप्पे अर्को सिजन क्लबमा नदेखिन सक्ने बताएका छन् ।
उनले दुवै खेलाडी अर्को सिजन क्लमा रहने ग्यारेन्टी आफुले लिन नसक्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय दुवै खेलाडी पीएसजी भन्दा बाहिर निस्कन खोजिरहेका छन् । तर टुचेल दुवै खेलाडीलाई क्लबमा राख्न जोड गरिरहेका छन् ।
ब्राजिली स्टार नेयमार पछिल्लो समय स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसंग जोडिएका छन् । उनी सन् २०१७ मा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानी मुल्य १ सय ९८ मिलियन पाउण्डमा फ्रान्सेली क्लब आएका थिए । यस महिनाको सुरुमा भएको एक समारोहमा फ्रान्सेली स्टार एम्बाप्पले क्लब छाड्ने संकेत गर्दै आफु नयाँ परियोजनामा सहभागि हुने बताएका थिए ।
‘म यो सबै कुरासंग भिजेको छु । हुन सक्छ, जुन कुरा मैले सामना गर्नेछु, अघिल्लो महिना त्यो सही नहुन पनि सक्छ ।’ टुचेल भन्छन् । ‘अवस्था जस्तो छ, त्यस्तै छ । यहाँ धेरै अनुमानहरु छन् । त्यसको अर्थ हो, हामीसंग धेरै क्षमता र गुण भएका प्रतिभा रहेका छन् ।’ उनले थपे ।
‘एउटा प्रशिक्षकको हिसाबमा मेरो ईच्छा प्रष्ट छ । म सबै खेलाडी पीएसजीमा रोकिएको हेर्न चाहन्छु । मेरो काम सकिएको छैन, बल्ल सुरु भएको छ ।’ उनको भनाई छ ।
टुचेलले भर्खरै मात्र पीएसजीसंगको सम्झौता सन् २०२१ सम्म पुर्याएका छन् । पीएसजीले सफलतापुर्वक लिग वानको उपाधि रक्षा गरेको थियो । घरेलु कप हात पार्न असफल पीएसजी च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को खेलबाट बाहिरिएको थियो । एजेन्सी
प्रकाशित मितिः २०७६ जेठ १४, मंगलबार